China Silicone Card Holders ifektri abakhiqizi | SJJ
Abaphathi bekhadi lefoni abicah yizinto ezifanele zokukhushulwa, ukupha, ukukhangisa, ukuhlobisa njalonjalo. Ngamateyipu wokunamathela we-3M anamathela ohlangothini olungemuva, abaphathi bekhadi le-silicone bahlala isikhathi eside ukuthi bangasetshenziswa isikhathi eside, baqinile ngokwanele ukuthi bangawi kalula. Osayizi abahlukahlukene kufanelekile ukubeka izitayela ezahlukahlukene zamafoni asuka kumikhiqizo edumile kuwo wonke umhlaba, ukubamba kahle amakhadi wesikweletu, amakhadi e-ID, amakhadi okukhomba, amakhadi wokuthola imali, amakhadi ezokuthutha, amakhadi ezokuphepha, amakhadi we-VIP, amathikithi, imali, i-earphone, izintambo zedatha nokunye.
Abaphethe ikhadi le-Siliconeyizinto ezifanele zokukhushulwa, ukupha, ukukhangisa, ukuhlobisa njalonjalo. Ngamateyipu wokunamathela we-3M anamathela ohlangothini olungemuva, abaphathi bekhadi le-silicone bahlala isikhathi eside ukuthi bangasetshenziswa isikhathi eside, baqinile ngokwanele ukuthi bangawi kalula. Osayizi abahlukahlukene kufanelekile ukubeka izitayela ezahlukahlukene zamafoni asuka kumikhiqizo edumile kuwo wonke umhlaba, ukubamba kahle amakhadi wesikweletu, amakhadi e-ID, amakhadi okukhomba, amakhadi wokuthola imali, amakhadi ezokuthutha, amakhadi ezokuphepha, amakhadi we-VIP, amathikithi, imali, i-earphone, izintambo zedatha nokunye.
Isikhunta ukushaja mahhala ngemiklamo yethu ekhona, futhi imiklamo evela kumakhasimende yamukelwa. Eminye imisebenzi eyengeziwe ingafinyelelwa ngokunamathiselwe njenge-wiper micro screen wiper, izikhwama eziningi zamakhadi ama-2 noma abaphathi abaningi, izitika noma abanye.
Amalogo: Amalogo angaphrintwa, afakwe embossed, alahlwe ngombala ogcwele
Okunamathiselwe: i-3M tape yokunamathisela nabanye
Langaphambilini Ama-Coasters weSilicone
Olandelayo: Amawindi Wekhebula Abicah
Umnikazi wekhadi leselula
Umnikazi wekhadi lesikweletu
Isiphathi sekhadi lesikweletu sefoni
abaphethe amakhadi efoni
Umnikazi wekhadi le-Silicone lefoni
Abaphethe ikhadi le-Silicone